သြရမတောင်တန်းပေါ်က စီးဆင်းခဲ့သောနေ့ရက်များ.(၃) | ဘဝအလင်းရောင်
Posted by ဘ၀အလင်းရောင် at 6:24 AM
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် နှင့် သင်္ခန်းစာ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြေကို စတင်ခြေချမိပြီ။ညနေ သုံးနာရီရှိပြီ။ နှာဝသို့တိုးဝင်လာသောစစ်တွေလေက အေးစိမ့်နေသည်။ရခိုင်ဒေသ၏လေကိုစတင်ရှုမိခြင်းပင်။စစ်တွေလေ
တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွင် မွေးဖွားခဲ့သောသူ့အဖို့ပင်လယ်ကိုဖြတ်သန်းကာဝင်ရောက်လာသော
သည်လေမျိုးနှင့် မစိမ်း။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ တွန်းတိုက်မှုမှ လွတ်ကင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့သော သည်လေသည် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှု ရှိမည်မှာ မလွဲ ပေ။ ရန်ကုန်လေနှင့်မတူဟုတော့ခွဲခြားပြောနိုင်သည်။
အခုရခိုင်လေက စတင်မိတ်ဆက်နေလေပြီ။ မနက်ဖြန်ဆိုပါက ရခိုင်အစားအစာကမိတ်ဆက်လေအုံးမည်။
စစ်တွေလေဆိပ်အဆောက်အဦသည် သန်ရပ်ခန့်ငြားနေသည်။သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှုလည်းရှိသည်။ လေဆိပ်အဆောက်အဦထဲရောက်လာတော့ အဆောက်အဦအတွင်း စကားပြောသံတို့ကဆူညံနေသည် ။
ရခိုင်စကားစကားပြောနေသည်က များ၏။ဗမာစကားပြော ပြောနေကြသည်မှာ သူတို့သုံးပါးသာ ရှိမည်ဟု
ထင်မှတ်မိသည်အထိပင်။ ရခိုင်စကား ကိုနားမလည်သော်လည်း စကားလုံးအချို့ကိုတော့သူနားလည်နေ
“ကိုယ်တော်တို့ ဇာလားဖို့ယာလဲ သုံးဘီးနဲ့ကြွလို့ရပါရေ ”
စပ်သည်။ထိုတကာလေးသည် မျက်နှာကသွယ်သွယ် အရပ်က ၅ပေ ကျော်ကျော်လောက်ရှိမည်။
အသားကသိပ်မဖြူ ၊ရိတ်ထားသောမှုတ်ဆိတ်များနှင့် မျက်နှာအနေထားက အိန္ဒိယနွယ်စပ်ကဲ့သို့ရှိ၏။
“ သုံးထောင်ပီးပါ ကိုယ်တော်”
“ များတယ်ကွာ နှစ်ထောင်ပေးမယ်”
ဦးမုနိန္ဒပြောလိုက်သည်မှာ စစ်တွေလေဆိပ်ကနေ ခေမာမဏ္ဍိုင်ကျောင်းအထိ သုံဘီးဆိုင်ကယ်ခမှာ
“ ဦးဓမ္မိက တပည့်တော်တို့ပစ္စည်းတွေသယ်လာပြီ ”
ဦးပညာဓဇ စကားကြောင့် ပြုတင်းပေါက်မှ အဆောက်အဦးအပြင်ဘက်သို့ကြည့်လိုက်မိသည်။ သူတို့အပ်ပစ္စည်းများကိုလက်တွန်းလှည်းဖြင့်သယ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
“ ကိုယ်တော်တို့ ပိုက်စည်း(ပစ္စည်း)တွေကိုတပည့်တော်တို့သုံးဘီးထိသယ်ပေးမယ် နှိုက်ထောင့်ငါးရာ ပီးပါရေ ”
နောက်ဆုံး သုံးဘီးဆိုင်ကယ်သမားပြောသည့် နှစ်ထောင့်ငါးရာ ဈေးနှင့်တည့်လိုက်ရသည်။
ပစ္စည်းများရွေးပြီး လေဆိပ်အဆောက်အဦးထဲကထွက်လာသည်။ ဆိုင်ကယ်သမားက ပစ္စည်းများကို လက်တွန်းလှည်းပေါ်တင်ကာ ထွက်သွားပြီ။ လေဆိပ်အဆောက်အဦး အထွက်ပေါက်ဝရောက်တော့ တာဝန်ရှိရဲ
၀န်ထမ်းသုံးဦးက သူတို့အား ကြွရောက်တည်းခိုမည့် နေရာကိုမေးမြန်းသည်။သူတို့သာသနာ
ပြုကဒ်ပြားများကို ထုတ်ပြပြီး ခေမာမဏ္ဍိုင်ကျောင်းတွင်တည်းခိုမည်။နောက်ဘူးသီးတောင်သို့ ဆက်သွား
မည့်အကြောင်း စာရင်းပေးလိုက်သည်။ ပြီးတော့ အဆောက်အဦးအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်။
သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ဆီသို့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှ တိုးဝင်လာသောရေငွေ့ပါသောလေက ဆောင်းရနံ့တို့ထုံမွမ်းထားသောကြာင့် အေးစိမ့်လာနေသည်။ စစ်တွေကားလမ်းမပေါ်တွင် ဆိုက္ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များ၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ၊ ကားများက ဥဒဟိုသွားနေကြသည်။ လမ်းဆုံတစ်နေရာအရောက်တွင် ခန်းနားသော အ၀ါရောင် အဆောက်အဦး ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ ရွှေတိဂုံစေတီ ပုံတူစေတီ တစ်ဆူကိုလည်းဖူးတွေ့ရသည်။ စေတီနှင့်နီးသထက်နီးလာသည်။စေတီတော်ကြီးအရှေ့ရောက်
သုံးဘီးဆိုင်ကယ် သွားနေသောလမ်းသည် အကောက်အကွေ့များပါဘိ။
“ ဆိုင်ကယ် ဆိုင်ကယ် အထုပ် အထုပ် ”
ခမ်းလှမ်းလှမ်း ကလူတစ်ယောက်၏ အော်သံကိုသူကြားလိုက်ရသည်။ ဆိုင်ကယ်နောက်ဘက်ကိုကြည့်
“ ဦးဓမ္မိက တပည့်တော်ခြုံထည်အထုပ်ကျကျန်ခဲ့ပြီ ”
“ဦးပညာဓဇ တအားမငေးနဲ့နော် နောက်ဆို အထုပ်မကျန်ဘဲ လူပါကျန်နေအုံးမယ်”
ခုကိုတွေ့ရသည်။ ကျောင်းမုခ်ဝရောက်တော့ ရဲကျော်သူကျောင်း ဟုတွေ့ရသည်။သုံးဘီးဆိုင်ကယ်သည်
ရဲကျော်သူကျောင်း၏ မြောက်ဘက်အုတ်နံရံကပ်လျှက်လမ်းထဲ ချိုးကွေ့ဝင်သည်။ရဲကျော်သူကျောင်း၏
အနောက်ဘက်အုတ်နံရံထောင့် အကြော်ဆိုင်လေးအရှေ့ရောက်တွင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်သည်။
“ ကိုယ်တော်ဘယ်ကျောင်းလည်း ”
သောကြောင့်သာရောက်လာရသည်။ ရှေ့တွင်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုတွေ့ရသည်။ခေမာမဏ္ဍိုင်
“ ဟိုဘက် ကျောင်း ”
ဦးမဏ္ဍလ ညွှန်ပြရာသို့ သူကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏မုခ်ဦးတွင်မဏ္ဍိုင်ဟူသော စာလုံးကိုတစောင်းအနေထားဖြင့်တွေ့ရသည်။ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်ငှားခဲ့စဉ်က ခေမာမဏ္ဍိုင်ကျောင်းကိုသိသလို
မျိုး ဦးမုနိန္ဒ စကားကိုအခြေခံကာငှားခဲသည်။သူသင်္ခန်းစာ တစ်ခုထုတ်မိသည်။
မသိသည်ကိုမသိ၊ မတတ်သည်ကိုမတတ်၊မရှိသည်ကို မရှိ ဟု ရိုးသားစွာ ၀န်ခံခြင်းသည်ရှက်စရာမဟုတ်၊
မသိသည်ကို သိသလိုလို။မတတ်သည်ကိုတတ်သလိုလို၊မရှိသည်ကို ရှိသလိုလိုဟန်ဆောင်မျှောလိုက်နေခြင်း
သည် တကယ့်တကယ်အရေးကြုံလာပါက ပိုမိုအရှက်ရတတ်ကြောင်းသူသင်္ခန်းစာထုတ်မိသည်။သုံးဘီးဆိုင်
မောမဏ္ဍိုင်ကျောင်းသို့ ညနေ ၄း၄၅ နာရီရောက်သည်။ခေမာမဏ္ဍိုင်ကျောင်းက သာသနာပြု(ဗဟို)ဌာန
တော၊ မြေပုံ၊ ပလက်ဝသာသနာပြုဌာနများသို့ရောက်လာသောသာသနာပြုရဟန်းတော်များ၏ခေတ္တနားခိုရာ
လည်းဖြစ်သည်။ဆရာတော်သည် ခမီးတိုင်းရင်းသားဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ကချင်ဆောင်တွင် သူနှင့် တစ်ဆောင်တည်းနေခဲ့သော ဦးရဌပါလ ၏ဆရာလည်းဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းထုပ်များကို ဓမ္မာရုံ အရှေ့တွင်ချထားလိုက်သည်။ ဆရာတော်ဓမ္မာရုံပေါ်တွင်ရှိသည်ဟု ကိုရင်တစ်ပါး၏ပြောစကားကြောင့် သူတို့ဓမ္မာရုံပေါ်တက်ခဲ့ကြသည်။ဘုရားခန်းရှေ့တွင် ဆရာတော်နှစ်ပါးစကားပြောနေသည်။ ခေမာမဏ္ဍိုင်ဆရာတော်ကိုတော့ ဦးရဌပါလ ထံတွင်ဓာတ်ပုံတွေ့ထား
ဖူးသောကြောင့်သူသိနေသည်။ ကျန်ဆရာတော်ကိုတော့သူမသိ၊ ဘုရားကိုကန်တော့ပြီး ဆရာတော်ကိုသူတို့ ကန်တော့လိုက်သည်။ ကချင်ဆောင်က ဦးရဌပါလ ဆရာတော်အား လှူဒါန်းခိုင်းလိုက်သော မုန့်တစ်ထုပ်နှင့်
စာတစ်စောင်ကို ဆရာတော်အား သူဆက်ကပ်လိုက်သည်။
“ ဦးဇင်းတို့ ဒီကိုလာတာ သုံးပါးတည်လား”
“ မှန်ပါဘုရား ”
ဆရာတော်အမေးကို ဦးမဏ္ဍလ ကဖြေသည်။
“ ဦးးဇင်းက ဘယ်ဌာနလဲ ”
“ ဘူးသီးတောင်၊မင်းကိုင်းသာသနာပြုဌာနပါ အရှင်ဘုရား”
“ ဦးဇင်း ဘွဲက.. ”
“ ဓမ္မိက ပါအရှင်ဘုရား”
“ ကျန်နှစ်ပါး က “
“ တပည့်တော်က ပညာဓဇပါ၊ မောင်တောမြို့နယ် ဖားဝပ်ချောင်း သာသနာပြုဌာနမှာတာဝန်ကျပါတယ်”
“ တပည့်တော်က မဏ္ဍလ ပါဘုရား၊ မြေပုံမြို့နယ် မောင်ရှင်သာသနာပြုဌာနမှာတာဝန်ကျပါတယ် ”
“မနက်ဖြန်မောင်တောက ပရဟိတကျောင်း ဆရာတော်ပြန်ဖို့ရှိတယ် ။ ဦးဇင်းတို့က အခုမှရောက်တာဆို
တော့ချက်ခြင်းမသွားလို့မဖြစ်သေးပါဘူး ဒီမှာ နှစ်ရက် သုံးရက်လောက်တော့နေအုံး ”
“ဦးဇင်းတို့က နပသ တွေလား ”
သာသနာ့တက္ကသိုလ် ကို န ပ သ ဟုအတိုကောက်ခေါ်သည်။
“ န ပ သဆိုတော့ နောက်ပြန်သုတ် ပေါ့ ”
အဂန္တု ဆရာတော်ကနောက် ပြောင်သလိုပြောသော်လည်း သူ့စိတ်ထဲက သဘောမတွေ့မိ။ ထိုဆရာတော်ဆိုလိုသညိမှာ သာသနာ့တက္ကသိုလ်ဆင်းများ တောင်တန်းတွင်မနေနိုင်သောကြောင့် နောက်ပြန်ပြေးသည်ဟုဆိုလိုကြောင်း သူသဘောပေါက်သည်။
“ ပညာလောက လည်းရှမ်းပြည် ခဏပြန်သွားတယ်။ ပညာလောကအခန်းထဲနေကြပေါ့ ”
ဦးပညာလောကနှင့် သူ တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်တွင် ဆုံခဲ့ဖူးသည်။ ဦးပညာလောက ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ကမှ ဗဟိုသာသနာပြုဌာနသို့ရောက်သည်။
ဆရာတော်အမိန့်ရှိသည့်အတိုင်းသူတို့သုံးပါးကို ဓမ္မာရုံအပေါ်ထပ်ခန်းထဲသို့ ဦးဇင်းတစ်ပါးလိုက်ပို့
ပေးသည်။လိုက်ပို့ပေးသည့် ဦးဇင်း၏ ဘွဲ့အမည်ကိုမေးကြည့်တော့ ဦးပုည ခေါ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ပညာလောကခန်း၏ တဖက်တွင်အခန်းတခန်းရှိသည်။အခုအုတ်တွေ စီနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
“ တပည့်တော် အခန်းကတော့ ဖျက်လိုက်ပြီ ”
ဦးမုနိန္ဒ ပြောလိုက်သောစကားကိုသတိရသည်။အခု အုတ်စီနေသောအခန်းသည် ဦးမုနိန္ဒ အခန်းဖြစ်မည်။
သူတို့နေရမည့် အခန်းထဲတွင် ကုဋင်တစ်လုံး၊သော့မခတ်ထားသောသစ်သားဗီဒိုငယ်တစ်လုံးကိုတွေ့ရသည်။
မိုးချုပ်သည်နှင့် အအေးက သိသိသာသာပိုလာသည်။ သူတို့ရေမချိုးနိုင်ကြတော့၊ရေမျိုးသောကြောင့် ဘာမှအဖြစ်နိုင် ၊ရေချိုးမှားလျှင် အခန့်မသင့်က ဖျားနာနိုင်သည်။ဆက်ရမည့်ခရီးကလည်း များစွာများစွာ ကျန်သေးသည်။
ခေါင်းစွပ်နှင့်အနွေးထည်ကို စတင်အသုံးပြုရတော့သည်။အန်းကတော့လုံလုံခြုံခြုံပင်။တရားပွဲတစ်ပွဲမှ တရားဟောအသံကိုကြားနေရသည်။ ဗမာစကားဖြင့်ဟော ပြောနေခြင်းမဟုတ် ၊ရခိုင်စကားဖြင့်ဟောပြော
နိုးမှနိုးကြတော့သည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ နံနက် ၅း၀၀ နာရီရှိနေပြီ။
မျက်နှာသစ် ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြရန်ဆရာတော်ကျောင်းသို့ သွားကြသည်။
“ ကြွ ကြွ ” ဟု ဆရာတော်ကပြောသည်။
ဆွမ်းဝိုင်းတွင် ငှက်ပျောအူကိုချက်ထားသော ဟင်းက နှစ်ခွက်၊ မုန်လာဥဟင်းကနှစ်ခွက်၊ ငါးဟင်းတစ်
ခွက်ကိုတွေ့ရသည်။ မုန်လာဥ ဟင်းကို ခပ်ကာ သူ့ပန်းကန်ထဲ သူထည့်လိုက်သည်။ဟင်းကငန်ရောအစပ်ပါကဲ
နေသည်။ နောက်ဟင်းလည်း အစပ်များနေသည်။ငှက်ပျောအူဟင်းလဲ အစပ်များနေသည်။
သူဦးမဏ္ဍလ ကိုကြည့်လိုက်သည်။ဦးမဏ္ဍလ ကလည်းသူကိုပြန်ကြည့်သည်။ ဦးပညာဓဇက တော့ ခေါင်းငုံ့ လျှက်ဘုဉ်းပေးနေသည်။အစပ်ကြိုက်ဟန်တူသည်။ သူတို့ ရခိုင်ဟင်းအစပ်နှင့် စတင်တွေ့နေရပြီ။့်
နောက်လဲဆက်လက် တွေ့ကြုံ ရပေအုံးမည်။
0 comments em “သြရမတောင်တန်းပေါ်က စီးဆင်းခဲ့သောနေ့ရက်များ.(၃)”